Dibana noPhando lwePlastiki osasaza iinkqubo kwi-Snapchat - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Dibana noPhando lwePlastiki osasaza iinkqubo kwi-Snapchat
UGqr. Schulman.(Ifoto: UGqirha Schulman Utyando lweplastiki)
UGqr Matthew Schulman ngugqirha weplastikhi osekwe eNew York osebenzisa iSnapchat ukufumana abathengi. Izigulana zeMillennial ziyathontelana ziye kwi-ofisi yakhe yeUpper East Side yeBritt Butt Lifts. UGqirha Schulman akaziwa nje kuphela ngokuba ngoyena mntu ubalulekileyo kwi-Northeast – waziwa kakhulu nge-Snapchatting iinkqubo zakhe.
Inkonzo yemiyalezo ye-ephemeral yaziwa kakhulu njenge-app apho ulutsha olupholileyo olunjengoKylie Jenner lubhengeza imigca yelipstick yolwelo kunye OoD DJ bangaphambili ludumo lwabo kwakhona. Ngoku, oogqirha bathumela iinkqubo kwi-app, beqaqambisa yonke into ukusuka kotyando ukuya kwindlela yabo yokulala. UMqwalaseli uthethe noGqirha Schulman (kwi-Snapchat, NYCPlasticSurg), othi une-1 yezigidi zokujonga imihla ngemihla ngeevidiyo ezimfutshane zotyando lwakhe, ukufumanisa ukuba kutheni abantu bexakeke kangaka.
Ndicinga ngokunyanisekileyo ukuba i-Snapchat yayisetyenziswa kuphela ngabantu ukuthumela imifanekiso ehamba ze.
Ugqibe njani ukuqala ukusebenzisa i-Snapchat? Ndiyazi ukuba baninzi abantu abadumileyo abasebenzisa i-Snapchat kwaye bebefumana impendulo entle ke ndizamile ithamsanqa lam malunga neenyanga ezili-16 ezidlulileyo. Ngelo xesha, kusenokubakho omnye ugqirha wotyando ozama ukusebenzisa i-Snapchat ngoko ke bendiqala ekuseni ukuya ethekweni kwaye ndicinga ngokunyanisekileyo ukuba i-Snapchat isetyenziswa kuphela ngabantu ukuthumela imifanekiso yeze. Bendingazi ukuba kukho ukubanakho ukusasaza amabali, aqulathwe yividiyo yesibini yesibini.
Ibiyintoni iposti yakho yokuqala? Andizange ndisebenzise i-Snapchat ngaphambili ngenxa yoko bendisazama ukuqonda ukuba zenziwa njani izinto ezilula… njengokuthatha ividiyo uyithumele. Impendulo yokuqala yayimpofu kwaye ndicinga ukuba kuphela kwabo babebukele yayingabasebenzi bam! Ngokungafaniyo namanye amaqonga eendaba ezentlalo, kunzima kakhulu ukwakha abalandeli. Akukho zinqumli kuba abantu banokukufumana kuphela ukuba bakukhangela ngokukodwa. Kwiinyanga ezili-16 ezidlulileyo, ndandinabalandeli abathathu (kwaye abo yayingabasebenzi bam) kwaye ngoku usasazo lwam lubonwa ngaphezulu kwesigidi amaxesha ngosuku. Ugqirha Schulman wePlastiki(Ifoto: UGqirha Schulman Utyando lweplastiki)
Ngaba ukhe wazama amanye amaqonga ngaphambi kweSnapchat? Ndizamile iPeriscope iinyanga ezimbalwa kodwa ndafumanisa ukuba ayizanelisi iimfuno zam. Utyando lwam lude… ngamanye amaxesha iiyure ezine ukuya kwezintlanu nganye… .kwaye ababukeli abanalo ixesha okanye ixesha lokujonga ixesha lonke.
Kutheni ucinga ukuba i-Snapchat ibe lelona qonga lakho liyimpumelelo? Ngoku ndiyakwazi ukufota yonke iiyure ezili-14 ngosuku, kodwa ndizisasaze kubabukeli bam ngendlela yeevidiyo ezincinane. Ngoku banokubukela usuku lwam lonke malunga nemizuzu eli-10.
Uthumela ntoni kwi-Snapchat? Ngoku ndisasaza utyando, iiyure zam zeofisi kunye nemifanekiso engemva kwemiboniso. Ababukeli bam bafuna ukubona indlela abasebenzi bam abanxibelelana ngayo nezigulana naphakathi kokwenziwa kotyando ke kuye kwaba yinto engaphaya kwendlela yokubonisa utyando.
Ndiyakuqinisekisa ukuba ndiyakwazi ukuhamba nokuhlafuna itshungama ngaxeshanye.
Ngaba ukhe wafumana ukugxekwa malunga nokusasaza iinkqubo? Ndimele ndicace gca ukuba zonke izigulana zam ezivele kwi-Snapchat zisayine ifom yemvume evumela ukuba ndibathayiphe, ngenxa yoko akukho kwaphulwa kwabucala. Izigulana zilawula ukuba zingakanani, okanye zincinci kangakanani, iinkqubo zazo ezibonisiweyo. Abagxeki bayakuthi ukusebenzisa iSnapchat ngexesha lotyando kuyaphazamisa kugqirha kwaye kwezinye izizathu zokuba isigulana sibeke emngciphekweni omkhulu. Kubo nditsho ububhanxa. Umntu owahlukileyo ufota utyando, hayi mna. NdinguNjingalwazi woNyango lwePlastiki kwenye yeenkqubo eziphambili zoqeqesho kwisizwe, ke ndifundisa abahlali botyando kunye nabafundi bezonyango ngalo lonke ixesha. Oku kubandakanya ukucacisa amanyathelo otyando kubo ngelixa ndisebenza. Ukuba ukuthetha kwikhamera kuyaphazamisa kwaye kubeka abaguli emngciphekweni, njengoko abanye besitsho, kuyafuneka ke ngoko ukuba kuthiwe malunga nokufundisa abahlali bezotyando kwaye kufuneka sizisuse zonke iinkqubo zoqeqesho lotyando! Bububhanxa. Ndiyakuqinisekisa ukuba ndiyakwazi ukuhamba nokuhlafuna itshungama ngaxeshanye. Utyando lwe-Snapchat.(Ifoto: UGqirha Schulman Utyando lweplastiki)
Malunga neepesenti ezingama-50 zokuziqhelanisa kwam nemillennials.
Ngaba ucinga ukuba imidiya yoluntu itshintshe njani ukuba zeziphi iinkqubo zotyando zeplastiki ezifunwa ngabantu? Malunga neepesenti ezingama-50 zokuziqhelanisa kwam nemillennials. Aba bantu bancinci bacela iinkqubo ezinje ngokufakelwa kwebele, i-liposuction, i-lip fillers, kunye nokwandiswa kweempundu. Ukuthandwa kukaKim Kardashian kunye nabanye ababhinqileyo abadumileyo ku-Instagram abanjengoJen Selter kuyonyuse ngokupheleleyo ibango lokunyusa iimpundu. UKylie Jenner uncede ekunyuseni ibango lokugcwalisa imilebe kubafazi abancinci.
Ngaba ucinga ukuba abantu bajolise ngakumbi ekuphuculeni imbonakalo yabo kuba bahlala bethatha ii-selfie? Ndicinga ukuba siluntu olubonakalayo kunye nokuthandwa kweeselfie kunye neefoto-centric zemidiya yoluntu njenge-Instagram ngokuqinisekileyo yenze abantu bazi ngakumbi ngendlela abajongeka ngayo. Kwixesha elidlulileyo, ekuphela kwendlela yokubona ukuba ujongeke kangakanani kukujonga esipilini okanye ubone iphepha lephepha. Ngoku, ezi foto zihlala ngonaphakade kwi-intanethi kwaye sinakho ukutshintsha ii-selfie ngezihluzi. Oku kuqhubeka kusenza siqonde indlela esijongeka ngayo kunye nendlela esinokuthi ngayo sitshintshe indlela esikhangeleka ngayo.
Ngaba ucinga ukuba abantu bavulelekile ngakumbi kwiinkqubo kuba bebona abantu abadumileyo bebafumana kwimithombo yeendaba kwaye bafuna ukwazi? Ibala elinxulunyaniswa notyando lweplastiki liphelile. Zihambile iintsuku apho abantu beye benziwa utyando lwezithambiso ngasese. Ngoku, abantu benza utyando lweplastiki, baxelela abahlobo babo, emva koko bathumela imifanekiso yenkqubo kwi-intanethi. Kwaye kwimeko yam, endivumela ukuba ndiphile ndisasaze olo tyando kubantu abangaphezulu kwesigidi esinye! Oku kubekwa ecaleni kusenokwenzeka ukuba kunxulumene nabantu abadumileyo abavulekileyo ukubonisa iinkqubo zabo kwinyani kamabonakude nakwi-intanethi.
Ngaba kukho iinkwenkwezi ezithile zosasazo lwentlalo, ezinje ngoKylie Jenner, ezaziwa kakhulu xa abantu bezisa iifoto kuwe ngaphambi kweenkqubo? Ndiyabakhuthaza abaguli bam ukuba beze neminqweno yabo xa bebonisana nam. Ezi ziifoto zento abanqwenela ukubukeka ngayo emva kotyando. Kwixesha elidlulileyo, ezi bezisoloko ziyimifanekiso yabantu abadumileyo abanjengo-Angelina Jolie ngemilebe yakhe, uJennifer Aniston ngamabele akhe, uScarlett Johansson ngempumlo yakhe, uJo Lo okanye uKim Kardashian ngeempundu zakhe. Ngoku, abaguli bezisa iifoto zabasetyhini ezingaziwayo kwimithombo yeendaba eziqhelekileyo kodwa aziwa kakhulu kwimidiya yoluntu. Oku kubandakanya uKylie Jenner kunye UAbhigayil Ratchford .
Ngaba abathengi bayakuchasa ngokuchaseneyo? Isigulana ngasinye siyabuzwa ukuba singathanda ukusivumela ukuba sibathathe nge-Snapchat okanye ngoqhaqho. Uninzi luyasivumela, kuba banokuzithanda abalandeli be-snapchat ngokwabo. Malunga neepesenti ezingama-80 zezigulana zam ziyasivumela ukuba siye kwi-Snapchat utyando lwabo kwaye basayina ifom yemvume ethile yokuvumela oku. Bajonga inqanaba lokuvezwa, okuthetha ukuba banokucela ukuba sigcine lonke ulwazi ngasese kwaye sigubungele zonke iitatoo zabo. Abanye banemincili kangangokuba bavumela ukubonakaliswa okupheleleyo kwaye baya kuthetha kwikhamera kwaye babonise ubuso babo.
Luhlobo luni lwezithuba ze-Snapchat ofumana eyona mpendulo ilungileyo? Ndifumana ezona nkqubo zithandwayo ngokubhekisele kumdla wababukeli kukuphakanyiswa kweempundu zaseBrazil, ukunyusa isifuba, isisu kunye nonyango olungelolonyango njengeelaser kunye nokuzaliswa. Ubuhle be-Snapchat kukuba ukuba ubona into ongayithandiyo, nokuba kungenxa yokuba iyadika okanye iyigrafiki kakhulu, unokucofa nje isikrini kwaye uqhubele phambili kwividiyo elandelayo yesibini yevidiyo. Umbukeli ulawula oko babukeleyo.
Iindawo ze-Bingo ezikwi-Intanethi (2021) Iindawo ezi-5 eziPhezulu esizithandayo
Imakethi ye-KAWS: Ngaba ngumnqweno woMculi oPhawu oluBalaseleyo weHlabathi kwingozi yokuDubeka?
Sonke Siyayibhiyozela iPikoko: I-NBC iphumelele iMfazwe yokuHlola yeXesha leTV le2018-19
Imemo ye-GOP's FISA Memo yiFarce yobuqhetseba
ukuthandana ngesondo kunye nobudlelwane sites
charles manson art iyathengiswa
ezona zisongezelelo zokwakha izihlunu ngokukhawuleza
Kutheni i-ferrets ingekho mthethweni kwi-nyc
ukufunda i-physic simahla ngefowuni
ilizwe lokwenyani liba likhulu